IOS inoshanda sisitimu | IPhone nhau
iOS ndiyo inoshanda sisitimu izvo zvinounza michina senge iyo iPhone, iPad, iPod Kubata kana Apple TV kuhupenyu. Yake nyore uye optimization ndiyo mbiru dzayo kuitira kuti mamirioni evashandisi asarudze iOS pachinzvimbo chekusarudza mamwe mapuratifomu anoda zvimwe zvigadzirwa zvekufambisa sisitimu zvakanaka. Gore rega rega, Apple inoburitsa hombe iOS yekuvandudza izvo zvinowanzo kuunza zvakasarudzika maficha eakanyanya-ekucheka maturusi ari kutengeswa panguva iyoyo.
Apple inotanga Beta itsva uye tinosvika iOS 15.6
kubudikidza louis padilla inoita 1 zuva .
Apo vazhinji vedu taive tatopedza zvigadziriso zvakakura zveIOS 15, isingasviki mwedzi WWDC isati yasvika ...
iOS 16 public betas inogona kunonoka nekuda kwekugadzikana nyaya
kubudikidza Ngirozi Gonzalez inoita 1 zuva .
Iyo WWDC ichangosvika pakona uye ichave pakuvhura kiyi kana Tim Cook uye…
Updates! iOS 15.5, watchOS 8.6, macOS 12.4 uye tvOS 15.5 yakagadzirira kurodha.
kubudikidza louis padilla inoita 3 mazuva .
Mushure memavhiki ekumirira neBeta vhezheni yeIOs 15.5, iyo nyowani (uye pamwe yekupedzisira) hombe yekuvandudza…
Gurman anofanotaura kubatanidzwa kwakawanda uye mapurogiramu matsva muIOS 16
kubudikidza Ngirozi Gonzalez inoita 3 mazuva .
Kwasara mavhiki mashoma WWDC22 isati yatanga, chiitiko chikuru chegore chevagadziri veApple, chatanga. Mu…
kubudikidza louis padilla inoita Mavhiki e2 .
WhatsApp yakatotangisa mashandiro ayo matsva ayo anotendera iwe kuti uite kune mameseji anotumirwa kwauri pasina kunyora ...
iOS 16 ichaunza mamwe maficha ekuvanzika nekuwedzera iCloud Private Relay
iOS 16 iri mukati mekusvika kwese kuburitswa uye makuhwa mumavhiki apfuura. Pane zvishoma uye zvishoma kune…
iOS 15.5 beta inovhara ndangariro dzemifananidzo yakatorwa munzvimbo "dzinonzwa".
kubudikidza Tony Cortes inoita Mavhiki e3 .
Apple ichangobva kuita gadziriso nyowani yakawanikwa muIOS 15.5 beta uye inogona…
Iyi pfungwa inoratidza iyo Mamiriro ekunze app angaite senge muiPadOS
iPadOS yakasvika seyayo sisitimu yekushandisa yeiyo iPad makore mashoma apfuura. Nekudaro, kusvika ipapo iOS yaive ichichinja…
Apple ichangobva kuburitsa batch yayo nyowani yeBetas yemidziyo yayo yese, kusanganisira iOS 15.5 Beta 2, watchOS 8.6 ...
Maitiro ekugadzirisa chiratidzo chenzvimbo chinoonekwa pa iPhone yako
kubudikidza alex vincent inoita 1 mwedzi .
Chokwadi waona kuti chiratidzo chenzvimbo chinoonekwa nguva nenguva pamusoro pe iPhone yako,…
Apple yakavhura kurambidzwa kwerunyerekupe nezve masisitimu ayo matsva ekushandisa nguva yayakasimbisa…
10 matambudziko akajairika pa iPhone 6 uye maitiro ekuapedza
Dhawunirodha iwo matsva matsva eIOS 11 uye macOS Yakakwira Sierra
Zivisa mafoni kana maitiro ekuita yako iPhone kukuudza kuti ndiani ari kukushevedza
IOS 10 download zvinongedzo
Tricks kuponesa data pane iyo iPhone neIOS 10
Inogona here iOS 10 kuiswa pane iPhone 4s? Uye pane iyo iPhone 5?
Maitiro ekutarisa kuti firmware iri kusaina chii
Maitiro ekudzima zvachose ako mapikicha pane iPhone uye iCloud
Zvinongedzo zvekuburitsa kwakananga kweIOS 8.1
Maitiro ekugadzira uye kugamuchira mafoni kubva kune yako iPad neIOS 8
Zvinongedzo kune iOS 8.0 Dhawunirodha Direct